Piritsi rine OpenSUSE iri kuuya | Linux Vakapindwa muropa
Iyo inozivikanwa kambani MJ Tecnology, iyo kambani yanga ichishanda pa piritsi chirongwa neUbuntu yazivisa iyo kuvandudzwa kwetafura ine OpenSUSE yakaiswa.
Piritsi iri ichave iine hunhu hwakafanana kune iyo piritsi ine Ubuntu, ine mini vhezheni uye hombe vhezheni yacho.
Pakati pezvinhu izvi zvemahara, isu tine Intel Atom x5 Quad Core pa2 Ghz yeiyo mini vhezheni uye Intel Atom x7 Quad Core pa2,5 Ghz yeiyo hombe vhezheni(Katana). Kana iri yeRam, isu tine 2 Gb yeRamu mune diki vhezheni uye 4 Gb yegondohwe muKatana vhezheni.
Kana iri kamera, tine 13 megapixel yekumashure kamera uye 8 megapixel yekumberi kamera mune katana vhezheni uye 8 megapixel kumashure kamera uye 5 megapixel yekumberi kamera mune mini vhezheni. Ivo vaviri vanozove neiyo yakazara HD skrini, iine 9 inches mune Mini vhezheni uye gumi mainji mune yeKatana vhezheni.
Uyewo isu tine 64 Gigs yekumukati ndangariro mune Mini vhezheni uye kusarudza pakati peguru 128 Gigas EMMC uye 256 GB SSD mune Katana vhezheni, mamwe maficha ayo pasina mubvunzo ari ekare. Bhatiri i7500 milliamps mune Mini vhezheni uye 8500 milliamps mune yeKatana vhezheni.
Piritsi racho ine OpenSUSE inoshanda sisitimu, inoshandurwa zvizere sisitimu inoshanda, uchikwanisa kuisa chinhu chimwe chete icho iwe chaunokwanisa kuisa pakombuta yedesktop, ndokuti, yakazara desktop ine hwindo rekushambadzira uye ese mapurogiramu anoenderana neOpenSUSE, kusanganisira ayo epamutemo ekuchengetedza.
Nezve mutengo, mutengo wekutanga weiyo yakakosha vhezheni ingangoita $ 399 yeiyo 128 Gig vhezheni uye $ 450 yeiyo SSD vhezheni, zvese zviri muKatana vhezheni. Mutengo weiyo Mini vhezheni haizivikanwe, asi zvinofungidzirwa kuti ichapihwa mutengo uri pakati pe $ 200 kusvika $ 300.
Kunyange zvakadaro kutengwa kwepiritsi hakuwanikwi, sezvo kuchine zvakawanda zvekuita, zvisinei, pane ratove ruzivo pane yepamutemo webhusaiti yeiyo purojekiti.
Kana iri yeiyo yekare Ubuntu piritsi iyo yaive ichigadziriswa, zvinoita sekunge chirongwa chakamiswa, sezvo pakupedzisira chirongwa ichi chaive chakanyanya kuda. Ndinovimba neOpenSUSE izvi hazviitike uye zvinouya muchiedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Hwendefa ine OpenSUSE iri kuuya